नेपालमा बुस्टर डोज लगाउने बेला आएको हो? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
नेपालमा बुस्टर डोज लगाउने बेला आएको हो?
कमला गुरुङ शनिबार, मंसिर १८, २०७८, ०८:०८:००
काठमाडौं- गत वर्ष माघ १४ गते नेपालमा पहिलो पटक कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछि जोखिम समूह र लक्षित वर्गको प्राथमिकताका आधारमा सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।
खोप अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म नेपालमा १ करोड ८८ लाख ६२ हजार २१६ मात्रा खोप लगाइएको छ। जसमध्ये एक करोड २४ लाख ८ हजार ३६९ जना (३३.७ प्रतिशत) ले पहिलो मात्रा र ८६ लाख १३ हजार ८४७ जना (२८.४ प्रतिशत) ले खोपको पुरा मात्रा लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ। अझै पनि आधा बढी जनसंख्याले कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी छ।
कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएको ६ महिनापछि शरीरमा क्रमशः एन्टीबडी कम हुँदै जान्छ। जसले गर्दा शरीरमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पुनः बढ्दै जाने सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले बताए। त्यही जोखिमलाई कम गर्न ‘बुस्टर डोज’ को आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘खोपको पूर्ण मात्रा लगाई सकेको ६ महिनापछि शरीरमा एन्टीबडी कम हुँदै जान्छ। त्या एन्टीबडीलाई बढाउनका लागि अर्को खोपलाई बुस्टर डोजको रुपमा लगाइने हो।’
पूर्ण खोप लगाइसकेपछि शरीरमा एन्टीबडी कम हुँदै गएमा पुनः एन्टीबडी बढाउन लगाइने खोपलाई बुस्टर डोज भनिन्छ। बुस्टर डोज सबैलाई भन्दा पनि जोखिम समूहमा पर्ने व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने डा पुनले बताए। प्राथमिकताका आधारमा दीर्घरोगी र जोखिममा रहेका समूहलाई खोपको उपलब्धताको आधारमा बुस्टर डोज दिनुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘नेपालमा अझै पनि धेरैले खोप लगाउन बाँकी छ। त्यसैले सरकारले प्राथमिकता र जोखिमको आधार निर्धारण गरेर खोपको उपलब्धताको आधारमा बुस्टर डोज दिनुपर्छ। जसमा दीर्घ रोगी, ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरु हुन सक्छन्।’
बुस्टर डोजलाई कसलाई र किने दिने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपालमा अझै पनि आधा बढी जनसंख्याले खोप लगाउन बाँकी रहेकाले पनि बुस्टर डोज बारे मिश्रित धारणा छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेल धेरैलाई खोप लगाउन बाँकी रहेकाले पहिले उनीहरु पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउँछन्। तर आवश्यकता अनुसार बुस्टर डोज बारे निर्णय गर्न सकिने उनले बताए।
‘हामीले अझै पनि धेरैलाई खोप लगाउन बाँकी छ। खोप अभियान बढी रहेको छ,’ उनले भने, ‘खोपहरु आउने क्रम जारी छ। बुस्टर भनेर डब्लुएचओ ले रेकमेन्डेशन गरेको छैन। जोखिम अनुसार तेस्रो भनेको छ। त्यो अवस्था आयो भने त्यही अनुसार हामी निर्णय गर्छौ।’
हालसम्म नेपालमा रहेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले बुस्टर डोज बारे कुनै निर्णय गरिनसकेको उनले बताए। डब्लुएचओले पनि बुस्टर डोज सबैले नभई जोखिम हेरेर लगाउन सकिने मात्र भनेको उनले बताए। हाल आफुहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको डा पौडेलको भनाई छ।
‘हाम्रो खोप सल्लाहकार समितिले बुस्टर डोज बारे कुनै रेकमेन्डेशन गरिसकेको छैन। डब्चुएचओले पनि सबैले लगाउनुपर्छ भनेको छैन। जोखिम हेरेर लगाउन सकिन्छ मात्र भनेको छ। त्यसैले हाल हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ,’ उनले भने।
पैदल हिँडिरहेका डाक्टर कुट्ने ट्राफिक प्रहरी निलम्बित ४९ मिनेट पहिले